တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: Android ဖုန်းတွေမှာ clone ပုံတူတွေအများကြီးပွားပေးမဲ့apk
Android ဖုန်းတွေမှာ clone ပုံတူတွေအများကြီးပွားပေးမဲ့apk
Android ဖုန်းမှာဓါတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် Clone Camera 2.0 ပါ။ (၁. ၁၁. ၂၀၁၃ ) ရက်နေ့ မှထွက်လာတဲ့ အသစ်စက်စက်လေးပါ။ ဒီကောင်လေးက ဓါတ်ပုံတွေကို ပွားချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေနှင့် မိမိတို့ ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ရိုက်ကူး နိုင်ပါတယ်။
မည်သည့် ဖုန်းအမျိုးအစားနှင့် မဆိုကိုက်ညီမှု့ ရှိပြီး Android version ( 2.3 ) အထက်တွေမှာအသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ screenshoot တွေကိုကြည့် ရင် စိတ်ဝင်စားသွားမှာပါ။
အသေးစိတ်ဖတ်ချင်ရင်တော့playstore မှာဝင်ဖတ်လို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ။playstore မှာလည်း install လုပ်လို့ ရပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်ယူရန် - playstore , zippyshare
Posted by အောင်မျိုး at 6:45 PM